Iifowuni ze-Smartphone ezilungiselelwe iiterminal ze-Android | I-Androidsis
Ukuba uhlala usebenzisa eyakho Isiphelo sendlela Android ukumamela umculo onokuba nomdla kuwo ii-headphone ezintsha esifuna ukukubonisa namhlanje. Imalunga ne- Umqolo womqolo wee-headphone zestereo ezivela kuPlanticYenzelwe kuphela ii-smartphones, ngakumbi i-iOS kunye ne-Android.
Masiqale nge I-Plantronics BackBeat 903+, iseti yentloko engenazingcingo edibanisa ifowuni yakho ngeBluetooth. Inamaqhosha onokuthi uphendule ngawo kwaye usike iifowuni ozifumanayo ngelixa umamele umculo, kunye nomboko ophindwe kabini. Ixabiso layo ngu 80 euro.
Ngenxalenye yalo, i Ukubuyela emva kwiPlothiyori 216 Ineentambo, apho unokutshintsha ingoma omamele yona kunye nokuphendula kunye nokuphelisa iifowuni ezingenayo.
Ikwanombhobho. Iseti yentloko ibalasele ngokuba neepads ezizahlula isandi ezinezithethi ezincinci ze-neodymium kunye neentambo zayo ezinokurhoxiswa, uphawu olubenza bangabambeki, into ebacaphukisayo abasebenzisi. Ixabiso layo ngu 50 euro.
Kusele kuthi ukuba sithethe Ukubuyela emva kwiPlothiyori 116, Efana ncam naleyo yangaphambili. Kwintambo yayo abalawuli baguqula iimowudi zomsindo kwaye baphantsi kwaye baphakamise umthamo wokuveliswa kwakhona, kunye nemakrofoni yayo ukuze bakwazi ukuthetha emva kokufumana umnxeba kwakhona. Iintambo zayo ziyarhoxa kwaye inexabiso lama-30 kowethu.
Ukuba unomdla wokufunda ngakumbi ngohlobo lwe-BackBeat yee-headphone zestereo, ndwendwela iwebhusayithi ye Plantronics.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Ezinye izixhobo » Iifowuni ze-Smartphone ezilungiselelwe ii-terminals ze-Android
Andikwazi ukudibanisa ii-headphone ezingama-903 kwi-galaxi2plus… ukhona umntu owaziyo ukuba angayenza njani?
I-Mysms iza kwi-Android ukugcina abo basasebenzisa iSMS